A ZTE mobile n'okpuru koodu aha A0722 nwetara asambodo nke TENAA | Gam akporosis
N'agbanyeghị ọgụ ndị ZTE na United States nwere n'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ China anaghị akwụsị ọrụ ya na mba ofesi, ma belata na obodo gi. Agbanyeghị, dịka ekwuputara na nso nso a, ejirila udo dozie nke a n'okpuru a nkwekọrịta.
Ma isi okwu, ụlọ ọrụ ahụ ewebatala ngwaọrụ ọhụrụ na TENAA, na nke a enwetawo asambodo site na otu. Anyị na-ekwu maka ZTE A0722, a mobile nke anyị na-amaghị ihe ọ bụla banyere aha azụmahịa nke ọ ga-esi na ahịa, dị ka anyị na-eche na ọ ga-agbanwe aha ya, ma anyị maara isi njirimara na nkọwa ya.
Dabere na nchekwa data TENAA, ZTE A0722 nwere ihuenyo 5.45 nke anụ ọhịa na 1440 x 720 pikselụ mkpebi (HD +) n'okpuru usoro 18 panel:9. N'otu oge ahụ, ọ na-eji octa-core processor kwadoro ya na akara elekere nke 1.4GHz, yabụ anyị chere na ụlọ ọrụ ahụ ga-ahọrọ Snapdragon site na usoro 400 ma ọ bụ Mediatek, na-emezughị nke ahụ. Ọzọkwa, onye asambodo ahụ na-ekwu na ọ na-abịa na 3GB na 4GB RAM dị iche iche na 32GB na 64GB nke nchekwa n'otu n'otu.
Banyere ngalaba foto, ZTE emejuputa 13 megapixel mkpebi azu isi ihe mmetụta nke dị n'akụkụ aka ekpe elu, na onye na-agba ụta 5MP e kenyere maka iwepụta onwe ya na oku vidiyo.
N'aka nke ọzọ, kọmputa na-agba ọsọ Oreo mbipute 8.1 nke gam akporo, ihe dịka 147 x 69.5 x 7.9 mm, dị 135 g, nwere onye na-agụ akara mkpịsị aka n'azụ dị n'akụkụ igwefoto ma kwadebere ya batrị 3.100mAh nke, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ga-enye anyị nnwere onwe dị mma na nnabata Na mgbakwunye na nke a, n'oge mmalite ya, onye nchịkwa China debara aha abụọ: otu ojii na nke ọzọ acha anụnụ anụnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A ZTE mobile n'okpuru koodu aha A0722 nwetara asambodo nke TENAA
VLC anaghị akwado Huawei Anyị na-enye gị azịza ya na vidiyo ma kọwaa ihe kpatara ya